Indoda yadlalela ikhaya layo ilotho, kodwa yawina okuningi - Indlela yokuphila 2022
Indoda yadlalela ikhaya layo ilotho, kodwa yawina okuningi
U-Evgeny Zelensky waseDnipro ubelokhu edlala ilotho cishe iminyaka eyi-10. Indoda inenhlanhla enkulu: inhlanhla yammoyizela izikhathi ezingaphezu kwesisodwa, futhi yathola ama-winnings afika ku-hryvnia eyinkulungwane.
Futhi kulokhu ukwazile ukuthatha okungaphezulu kakhulu kokudlala ilotho yeMegalot kunanoma ubani omunye.
Ake siqale ngeqiniso lokuthi u-Eugene akawinanga neyodwa, kodwa cishe izigidi eziyisithupha, ngokunembile, 6,179,943. Kodwa akugcini lapho! Ku-"Megalot" angawina ukubheja okuningana ngesikhathi esisodwa, ngakho kwenzekile ngosozigidi osanda kwenziwa !! U-Eugene wayekholelwa kudala ekuwineni, nakuba lesi sikhathi esijabulisayo sasingekho isibikezelo esithile. Okokuqala, wabelana ngenjabulo yakhe nabesifazane bakhe abathandayo: umama nonkosikazi. Bajabula, futhi abazange bangabaze ukuthi ngelinye ilanga uyowina isamba esikhulu.
U-Eugene uzibona enenhlanhla empilweni. Unonkosikazi omuhle, izingane ezimbili, isitolo sakhe, usozigidi asibiza ngokungenamahloni esihamba phambili esifundeni. Uthi abantu baze bafike kubo bezofuna izimpahla besuka kude. Ngemuva kokuba i-multimillionaire, ibhizinisi ngeke liyeke. Phela leli bhizinisi limlethela injabulo nenjabulo.
Njengawo wonke amalungu e-M.S.L. Millionaire Club, u-Evgeny nomkakhe bachitha izinsuku ezimbili ezingenakulibaleka eKiev: wagibela i-limousine emhlophe ewubukhazikhazi, wachitha ubusuku bonke ehhotela elinomlando ocebile, elakhelwe ngemali yokudayiswa kwamalotho, wabukisa phambi kwama-soffits ngesikhathi sokuthwebula izithombe (okuyiqiniso, okwakuthandwa kakhulu umkami). Njengesikhumbuzo, umndeni wabawinile uthole i-albhamu kanye ne-flash drive enezithombe zochwepheshe.
Umbhangqwana udle kwenye yezindawo zokudlela ezihamba phambili e-Kiev, futhi uhambo olukhethekile kwaba ukuvakashela uhla lwezemidlalo eBrovary, lapho ama-Olympians ase-Ukraine ecija amakhono awo. Lapho, lo mbhangqwana ukwazile ukuveza yonke imizwa nemizwa ebakhungathekisayo, ukudubula ngezibhamu ezinhlotsheni ezahlukene futhi ugibele isithwali sangempela sezikhali.
Ngabe kukhona okushintshile njengoba enqobe ngaphezu kuka-6 million? Ngaphakathi, kusho u-Eugene, konke kusafana. Wayesevele eyindoda eqiniseka ngamandla akhe nasemandleni akhe ezezimali, udonga lwangempela lwamatshe lomkakhe nezingane.
Nokho, kukhona okushintshile endaweni ezungezile. Okokuqala, abaningi baqala ukudlala ilotho ngethemba lokuwina, njengo-Evgeny. Okwesibili, abanye abangani baqala ukuba nomona futhi bafuna izizumbulu zemali. Usozigidi akalilahli ithemba ngalokhu.
Lena indlela enhle yokuhlola ukuthi ubani umngane wakho wangempela nokuthi ubani okungeyena,” kuchaza yena ngokuhlakanipha.
U-Eugene uthi akakahleli ukuthi izigidi zakhe uzozichitha kuphi. Okwamanje, ingxenye yemali isisetshenziswe ukulungisa. Kodwa umndeni uhlela ukuthenga indlu yawo. Leli yiphupho ababelicabanga bedlala ilotho. Kodwa, njengoba ukuwina kwaba kukhulu kakhulu kunalokho okwakulindelwe abakwaZelensky, bacabanga ukuhamba nokufundisa izingane emanyuvesi amahle ngale mali.
Usozigidi waseDnipro uyaqhubeka nokudlala ilotho futhi uzimisele ngokuwina kakhudlwana. Uphinde weluleke wonke umuntu ukuthi adlale futhi akholelwe enhlanhleni, khona-ke konke kuzohamba kahle!
Futhi ungazama inhlanhla yakho manje ngokuthenga amathikithi elotho yeMegalot njengamanje.
U-Shalva Amonashvili: "Izingane zifuna ukukhululeka, zinikeze le nkululeko, kodwa zihlakaniphile, inkululeko ehlakaniphile"
Indlela indoda ebonisa ngayo ukungabi nandaba: 7 izimpawu eziyinhloko
Indlela yokunakekela izinwele zakho ukuze zingabi nje bushelelezi, kodwa zinwebeka futhi zicwebezele
Indlela yokunakekela izinwele zakho entwasahlobo ukuze zisheshe zibe bushelelezi njengosilika? Umhlanganyeli wephrojekthi ethi "Bachelor" uKatya wabelane ngemithetho yakhe eyisisekelo yokunakekelwa kwezinwele